China 24kV 200A Bushing Insert orinasa sy mpanamboatra | Anhuang
Anhuang manokana amin'ny Ampidiro bushing, manome fampidirana Bushing avo lenta izahay. Mifanaraka amin'ny fenitra IEEE386, sy IEC ny vokatray.
24kV 200A Bushing dia mampiditra kofehy ao anaty fantsom-boaloboka manerantany mba hanomezana fiasa mitovy amin'ny famafazana entana. Ny fampiasana ny tsindrona bushing dia mahatonga ny fametrahana sy fanoloana saha azo atao ary mahomby. Ny famafazana bushing sy ny kofehin-kiho dia misy ny singa ilaina amin'ny fifandraisana tapaka rehetra. Ny bushing Insert dia mampiasa làlana iray feno patanty amin'izao fotoana izao, izay tsy misy afa-tsy teboka famindrana iray ankehitriny, ao anatin'ny fampidirana azy. Ny toetra tsy dia sarotra amin'ny famolavolana lalana ankehitriny dia manome fahombiazana ambony sy azo antoka.
Ny broach ao anatiny dia ahafahana mametraka fametrahana fehezanteny torque tsara. Amin'ny fampiasana ny fitaovana torsiaka azo apetraka, ny fantsom-panafody dia azo henjanina tsara ao anaty lava-drano raha tsy misy ny tahotra sao ho vaky tampoka ilay baomba. Ny peratra fanondroana fantsom-pahefana manokana, miorina amin'ny tsipika boribory amin'ny boloky ny bushing, dia manafoana ny tombantombana amin'ny fametahana ny kiho fametahana ny sisin'ny bushing.
Ny peratra mavo mamirapiratra dia manome valiny eo noho eo hamaritana raha napetraka tsara eo amin'ny sisiny ilay kiho.
Ny fitambaran-kazo tokana mandalo dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny insulta voadio solifara avo lenta sy fingotra EPDM semi-conduction. Rehefa ampifandraisina amina singa iray misy isa azo ovaina, ny fampidirana bushing dia manome fifandraisana voaaro sy azo alentika tanteraka ho an'ny fiasan'ny fanapahana entana.
1.INSULATION: fingotra EPDM avo lenta, peroxide-sitrana, namboarina sy namboarina tao an-trano ho an'ny fampisehoana sahaza sy azo itokisana.
2.LATCH INDICATOR RING: Ny peratra mavo mavo mamiratra dia manafoana ny fametahana kiho amin'ny alàlan'ny fanomezana antoka ny fifandraisana misy kalitao.
3.SEMI-CONDUCTIVE SHIELD: fingotra EPDM avo lenta dia manome ampinga miaro maty mialoha izay azo antoka fa manana fotodrafitrasa izy ireo.
4.CONTACT HOLDER: Ny singa varahina dia mamindra ny diany ankehitriny avy eo amin'ny piston-contact mankany amin'ny studing well bushing.
BASE 5.THREADED: 3/8 "-16 kofehy UNC Copper dia manome fifandraisana amin'ny studing well bushing.
6.HEX BROACH: 5/16 "hex broach dia mamela ny fametrahana tsy tapaka miaraka amin'ny fitaovana torque.
Maso 7.GROUNDING: Taby telo novolavolaina ho ampinga semi-conductive ho an'ny fametahana tariby amin'ny tany hitazonana ny fiarovana eo anoloana.
FIVORIANA 8.ARC SNUFFER: Ny plastika arc-ablative dia mamokatra entona mamono arika mandritra ny asa famindrana entana.
9.SEMI-CONDUCTIVE SHIELD INSERT: fingotra EPDM avo lenta dia manome tanjaka mekanika sy fiarovana elektrika mitovy.
Previous: 15kV 200A Ampidiro ao anaty feedthru
Manaraka: 15kV 200A Asiana Bushing
15kV 200A fitaterana Loadbreak mihombo ...